जीवनभर निरोगी रहन यसो गर्नुहोस् Nepalpatra जीवनभर निरोगी रहन यसो गर्नुहोस्
जीवनभर निरोगी रहन यसो गर्नुहोस् ! भनिन्छ, निरोगी जीवन विताउन पाउनु आफैमा एक सौभाग्य हो । तर, यसका लागि कामना गरेर मात्र पुग्दैन । आफ्नै जीवनशैलीलाई सन्तुलित बनाउन सक्नुपर्छ । स्वस्थ रहनका लागि ठूलै काम गर्नु पर्दैन । दैनिक जीवनमा गरिने स-साना कार्यमा विशेष ध्यान दिएर पनि स्वस्थ एवं निरोगी हुन सकिन्छ । गौतम बुद्धको भनाईको सार छ, ‘जीवनभर निरोगी रहनु आफैमा उपहार हो । सकेसम्म हामी लामो आयु नै बाँच्न खोज्छौं र बाँचुञ्जेल निरोगी रहन चाहन्छौं । तर, कसरी निरोगी जीवन बाँच्ने ? कसरी लामो आयु बाँच्ने ? हामीले स्वस्थ्य, सन्तुलित र अनुशासित दिनचर्या अपनाएर लामो आयु पाउन सक्छौं । जीवनभर निरोगी रहन सक्छौं ।
रोग प्रकृतिको वरदान होइन, यो त मानिसबाट आएको हो